Iindaba - IMfihlo yezibane zoRhwebo
Iiblogi kunye neeNdaba>Imfihlelo yezibane zoRhwebo
Imfihlelo yezibane zoRhwebo
Ixesha lokuposa: Jan-20-2022
Udederhu lweevenkile zale mihla luvela emva komnye.Ubukhulu obuhlukeneyo kunye neentlobo zeendawo zokuthenga zifuna iindawo ezahlukeneyo zokukhanyisa, inxalenye nganye yokukhanya inexabiso layo, imisebenzi yayo ibandakanya: ukutsala ingqalelo yabathengi;dala imeko-bume engqongileyo efanelekileyo, uphucule kwaye womeleze umfanekiso wophawu;yenza umoya wokuthenga kunye nomoya wokuvuselela ukusetyenziswa.
Ukukhanya kwe-mall kuhluke kwezinye izibane zentengiso kuba ukusetyenziswa kokukhanya kwe-mall akukona nje ukubonakaliswa kwe-optics, kodwa kudibaniswa ne-aesthetics kunye ne-psychology ukudala indawo efanelekileyo yokuthenga abathengi.
Ulawulo lokuKhanya: Imekobume yokukhanya iyonke kufuneka ibe nentsingiselo yesingqisho, kunye nokukhanya kwendawo malunga ne-3000-4000LuX kunye nomlinganiselo wokukhanya kwendawo ukuya kwisikhanyiso esijikelezileyo malunga ne-5: 1 ukuqinisekisa ukuchasana kwesingqisho kwendawo yonke.
Ubushushu boMbala: Khetha ubushushu bombala obuyi-3500K ukwenza umoya opholileyo, onesitayile kunye nomncinci.
Ukunikezelwa koMbala: Khetha izibane ze-LED ezinesalathiso sombala ongaphezulu kwama-90 ukuqaqambisa umbala wokuqala wempahla.
Ukhetho lwezibane: Sebenzisa izibane ze-LED njengezibane ze-accent kurhwebo, kunye nendibaniselwano yee-engile ezincinci neziphakathi.
Ukukhanya okufudumeleyo kwenza ukuba izinto ezibhakiweyo ezityheli zibukeke zimnandi kwaye ziyamema, zibanika inkangeleko esanda kubhaka.Ukukhanya okuthambileyo okutyheli kunika imvakalelo efudumeleyo kunye nevumba elimnandi leempawu zokupheka iipastries.
Ubucwebe bubunewunewu, kwaye ixabiso ngokubanzi liyabiza, kodwa iimfuno zokukhanyisa zokubonisa zahlukile ngenxa yezixhobo ezahlukeneyo.
Ngokweedatha ezifanelekileyo, ubucwebe begolide bunokubonisa eyona mpembelelo intle yokubonakala phantsi kokukhanya kunye ne-3500K ~ 4000K ubushushu bombala, i-jadeite, i-jade kunye nobucwebe be-agate bugqwesileyo kwi-4500k ~ 6500k lobushushu bombala, olona bushushu bombala bobucwebe bedayimani yi-7000K ~ 10000K.Igolide, iplatinum, iperile, njl. ngenxa yobukhulu bawo buncinci, ukukhanya kuyadingeka ukuba kuphakame ngokwaneleyo, malunga ne-2000lux;I-Jadeite, i-crystal, njl.
Kakade ke, ukuze kubonakaliswe iimpawu zobucwebe, ezifana negolide, iplatinam kunye neeperile ezibonisa ukukhanya ngokupheleleyo, isalathiso sesiganeko sokukhanya kufuneka silungiselelwe ngokufanelekileyo ukwenza "i-flash point" ebonakalisiweyo itsala ingqalelo yabathengi;I-Jadeite, i-crystal kunye nezinye izacholo kufuneka zihlawule ingqalelo kwingqiqo yokuhanjiswa kokukhanya.
Ukukhanya okuPhambili kweGumbi lokuHlala Ngaphambili:
Kutheni iimveliso kwiivenkile ezinkulu zinomtsalane ngakumbi? Okulandelayo:
Isibane sangaphandle seDonga, Ukukhanya kwangaphandle okukhokelela, Isibane sangaphandle soKhukula, UkuKhanya kweNtendelezo, Camping yangaphandle Solar Led Ligh, Izibane zangaphandle&Inkundla,